Ahoana ny fomba handresena ny fahatsapana tsy misy dikany - An-Tsaina
“Ahoana ny fomba handresena ny fahatsapana ho tsy misy dikany.”
Indraindray tsara ny miteny mafy ny lohateny. Tsara ny milaza zavatra maromaro amin'ny feo avo.
Mandany fotoana be dia be izahay amin'ny fitazonana zavatra maro tsy hita maso sy mangina mivezivezy eo amin'ny tontolo volondavenona amin'ny ati-dohantsika.
Fa ny milaza zavatra mafy dia manome antoka fa misy lohahevitra sasany hibahana habaka eo aloha ny masontsika, izay misy ny fandinihana azy ireo raha tsy misy ny rafitra anatiny manimba tena izay notazonin'ny psyches feno menaka tokoa.
Vakio mafy ny lohatenin'ity sombin-javatra ity.
Ny feo sy ny fahatsapana ny teny tsirairay ve dia mahatonga anao tsy hatahotra na hiaro tena?
Misy zavatra tsy tianao atrehana ve satria mieritreritra ianao fa, amin'ny lafiny iray, tsy ampy ianao?
Izany fahatsapana izany? Teo no nidiran'ny volantsika tsy misy dikany voalohany tamin'ny andro taloha: ny fahatsapana fa tsy ampy hery na ampy saina na manintona ampy isika ampy ara-panahy na tia ampy na zavatra hafa ampy na ny fiatrehana ny famadihana ny tsy mety aza ho lasa marina.
Fahatsapana fahalemena, tsy fahatanterahana, potika very maina.
Inona no fampiasana anao?
Inona no ilain'ny olona amin'ny tenany raha tsy afaka mitia izy ireo, mahita ny tena fiantsoana azy, na faly sy manampy ny hafa fotsiny?
Fanontaniana mampatahotra izany, azo antoka fa mila vahaolana henoina.
Nolazaina tamin'ny fomba zato sy manimba isan-jato isika fa tsy maintsy mandeha mandritra ny fotoana tsy voafetra, mandroso hatrany amin'ny zavatra tokony hisy antsika mamokatra , tsy maintsy fampiasana amin'ny olona, ​​na amin'ny fomba ahoana, na aiza na aiza.
Tsy fahita firy, na izany aza, ny fahazoantsika mamadika izany hevitra izany ho lasa fampiasa Saina .
Nahazo laza ratsy ny fitiavan-tena amin'izao andro izao, fa andao hifantoka eto tsy amin'ny fitiavan-tena tsy misy fotony sy kely hitazomana mafy araka izay azo atao, fa ny fitiavan-tena an'ny tena 'tena.'
Mety tsy hahatsapa isika fa mendrika hipetraka amin'ny fahanginana amin'ny andro fiasana, fa inona no mahomby kokoa: fotoana fohy hiasana fanahy? Sa mihaona amin'ny tanjona napetraky ny hafa amin'ny fanantenana fa ho hita taratra amin'ny karama izany?
Tena tsy misy maharatsy ny fampiasana voalohany indrindra ho anao.
Raha sitrana ianao dia sitrano ny tenanao.
Raha ho tia ianao, Tiavo ny tenanao .
Mijoro eo alohan'izao rehetra izao isika toy ny sivana: izay miditra ao amintsika dia mivoaka avy amintsika.
Mendrika ny fitiavana
Angamba ny fahatsapana ho tsy misy dikany lava indrindra sy be mpahalala indrindra dia avy amin'ny fahatsapana fa tsy tiana isika indraindray, izay indraindray marina: indraindray isika dia tsy olona be fitiavana.
Fa izany dia biby hafa tanteraka amin'ny fahatsapana fa tsy izy isika ZAVATRA ny fitiavana.
Matetika io kofehy velona io dia miverina any amin'ny ray aman-drenintsika (na tarehimarika hafa amin'ny taom-pananganana).
Eny, hoy ny olon-drehetra, “omeo tsiny ny ray aman-dreny!” saingy tsy liana amin'ny fanomezana tsiny izahay: eto izahay mba hadihadiana. Ny ray aman-dreny dia mahay mamorona ireo zavaboary bitika kely hanombohany ka mijanona ho zaza anaty mitarika ny fiainantsika any aoriana.
Ny fahatsapana fa tsy mendrika ny fitiavana dia fomba iray hanasaziana ny tenantsika aorian'ny nanolorantsika tena tamin'ny ray aman-drenintsika mba hialana tsiny. Fahadisoam-panantenana mamotika izay milaza fa tsy maintsy ao amintsika ny lesoka, raha tsy izany dia ho namaly araka ny nantenainy izy ireo.
Ny zaza anaty dia manomboka mieritreritra haingana fa tsy mendrika ny fitiavana.
Ny marina dia (a) mendrika fitiavana daholo isika rehetra, b) tsy misy amintsika mahalala ny fomba hitantanana izany, ary (c) ny hany fotoana tsy maha-mendrika anao dia rehefa mandany mandritra ny androm-piainana ianao manao fanazaran-tena ho tsy mendrika.
ny fomba fanaovana herintaona mandalo haingana
Makà fotoana hifandraisana sy hiresahana amin'ny zanakao anaty, fantaro ny antony mahatonga ny alahelo hijaly, ary jereo izay azonareo roa atao mba hahatonga ny fitiavan-tena ho lohalaharana.
Mendrika ny Miroborobo
Misy ny fiheverana fa ny sasany amintsika dia teraka mba hambinina, fa ny hafa kosa tsy hahazo fitsaharana mihitsy. Ary matetika ny fanavahana dia teny mikorontana sy tsy voafaritra antsoina hoe 'fifantohana.'
Hatramin'ny fotoana itodihantsika mitsangana dia nasaina nametraka làlana isika. 'Oh, izy dia ho injeniera' amin'ny iray amin'ireo stacking blocks. 'Natao ho an'ny amponga izy' amin'ny vilany sy lapoaly manapoaka iray.
Na izany aza, na dia niova in-jato tapitrisa aza ny taranja alohan'ny nidiran'ny fahamaotiana, dia ny 'fifantohana' ihany no lakilena, mitondra izany ny didy hoe manana tari-dalana voajanahary ianao na Zava-kendreny izay tokony hataonao, raha tsy izany dia tsy hahomby tanteraka ny fiainanao.
Izany no izy, tsy misy olon-kafa manana hevitra momba izany lalana izany ho anao. No.Maty. Iray.
Ireo feo rehetra ireo milaza aminao hoe iza sy aiza no tokony hisy anao? Very toy izany koa izy ireo. Mbola ratsy kokoa aza, tsy misy làlana izy ireo.
Tsy misy làlana voafaritra sy voatendry izay afaka fantatsika marina nefa tsy heverina ho very saina. Ny tsara indrindra dia manenjika 'zavatra' tsy tapaka isika rehetra vao mahita fa tsy eo izany.
Mendrika ny hanana asa lehibe, fanambinana ara-bola ary fanajana ny mitovy taona aminao ve ianao? Tsy misy fisalasalana.
Tanjon'ny fiainana, tanjon'ny asa, tsara izy ireo… raha toa ka tsy mifehy ny fahatsapana ny maha-izy azy ny olona iray rehefa tonga any aminy.
Azonao atao ny mpanoratra iray izay tsy nanoratra boky mpisolovava iray izay nahazo fifaliana hafahafa avy amin'ny zaridaina mitsivalana dia azonao atao ny manasitrana izay ny anjara birikiny ho an'ny mahasoa kokoa ny zanak'olombelona dia ny faran'ny herinandro iray natokana ho mpilatsaka an-tsitrapo Habitat for Humanity.
Rehefa te ho mpanoratra ianao, zaridaina, na mpitsabo, ianao dia ho . Tsotra izany.
Tsara kokoa? Na eo aza ny fampitandremana fanaitairana mahazatra avy amin'ny fampahalalam-baovao psychotic antsika, dia misy fotoana ny maha-ianao anao, ary ataovy izay tianao atao.
11 famantarana ny fisainana feno fankahalana tena
Ahoana ny fomba hamantarana komplexe ambany kokoa (sy ireo dingana 5 handresena azy)
Famantarana 5 Tsy miraharaha anao loatra momba ny eritreritry ny olon-kafa ianao
Fa maninona no halako be ny tenako?
Inona no azonao atao izao
Okay, noho izany dia zavatra iray ny milaza ara-dalàna fa mendrika ianao, fa ahoana kosa no handresenao lahatra ny tenanao fa marina izany?
Ireto misy fahazarana vitsivitsy izay mendrika raisina izay handresy lahatra anao amin'ny lanjan-tenanao.
Tsara ny manamarika fa ny fanovana dia tsy hitranga mandritra ny alina dia mila miverina miverina amin'ireo zavatra ireo ianao mandra-pahatonga azy ireo ho toetra faharoa.
Atsimbadika ny script
Fantaro aloha fa ny eritreritra miiba mandeha ho azy izay miteraka fahatsapana ho tsy misy dikany dia mahavoa ny olona rehetra, ary tsy mahatonga anao ho malemy na tsy mendrika ny fanirianao.
Raha ny marina, ny fanekena azy ireo dia mametraka anao amin'ny toerana matanjaka kokoa hiatrehana azy ireo, satria ny resaka momba ny tena tsy dia maninona loatra no lasa hany mpilalao irery ao an-dohantsika manana anjara fitenenana, ary matetika dia miteny amin'ny fomba feno.
'Tsy tapaka', 'mandrakizay' ary 'isaky ny fotoana' dia tsy namanao.
Ny zavatra iray momba ny fahatsapana ho tsy misy dikany dia tsy manana valiny marina mihitsy isika rehefa miakatra ny lohany ratsy tarehy.
foana ? Marina ? ianareo foana mikomy? Ho irery ianao MANDRAKIZAY ? Mipoaka ny zavatra ao aminao miatrika isaky ny fotoana ?
Mazava ho azy fa tsy manao izany izy ireo.
Lazao mavitrika amin'ny tenanao ny tsara vitanao, ny zava-bita mahatsiaro ho reharehanao ianao , ary ny fomba tsy misy an'izany.
Avadiho ho eritreritra mamirapiratra ho azy ny eritreritra ratsy (ANTS) mandeha ho azy: moramora, amin'ny fangorahana tena, toy ny mitaiza ilay zaza anaty.
Ny voka-dratsy ateraky ny fahatsapana ho tsy misy dikany dia mitifitra tena foana amin'ny ho avy: Tsy ho mpandresy Pulitzer mihitsy aho.
Marina ve? Izay ny lefom-pohy handeha miaraka aminao? Ahoana ny fandefasana azy io hiverina ary hifantoha amin'izay ataonao izao. Manoratra ve ianao? Mandeha tsara ve? Tena tsara!
Mivezivezy amin'ny misasakalina ao amin'ny toeram-piantsonana ve ianao? Efa nanao lalao ara-tsaina ve ianao mba hitazomana ny tenanao ho tototra sy hipoka mandritra ny fotoana maharitra? Tsara. Velona ianao izao dia izao.
Atsaharo ny fitifirana ny tenanao amin'ny ho avy.
Azo antoka ny aingam-panahy
Na inona na inona fahatsapantsika tsy misy dikany dia misy foana ny zavatra manentana antsika.
Mety mila mihady mandritra ny fotoana fohy isika handehanana any amin'izay hidiran'ny hazavana, saingy misy fotoana tsy azo lavina amin'ny fifandraisana, fifaliana ary fanajana izay mampahatsiahy antsika ny fahafinaretana hitantsika fiainana rehefa avelantsika hahita izany tokoa isika.
Mahazo aingam-panahy amin'ireo fanomezana an'arivony tapitrisa ART (taratra mandeha ho azy) manodidina anao.
Aza refesina amin'ny hafa ny zava-bitanao
Ny 'Worthless' dia midika hoe mandrefy ny tenanao amin'ny olona ianao, na manjavozavo na mivantana.
Mendrika. Kely kokoa.
Ambany noho iza? Averiko indray fa mila valiny ny fanontaniana, ary raha tsy manara-maso ny fanontanianao dia soraty ho toy ny eritreritra ratsy mandeha ho azy ary ampifanaraho amin'ny fisiany mandra-pahalany azy.
Vitsy dia vitsy ny mpanao hatsikana izay haingana amin'ny fanatsarana toa an'i Robin Williams, saingy manohy manandrana hatsikana ny olona.
Vitsy ny manam-pahaizana mihazona labozia ho an'i James Baldwin, saingy manohy mamelabelatra ireo mpandinika.
Tsy misy zavatra ataon'ny olona izay tsy tokony hataonao koa raha mirona hametraka ilay asa ianao.
Raha handeha ianao ampitahao amin'ny olon-drehetra ny tenanao , mety ho Batman ihany koa izy, satria tsy tena izy ary toy izany koa ny fanombanana ny fomba hiavahanao manohitra ny hafa.
Jereo fa milatsaka fotsiny io lanja io?
Mahatsiaro tena ho tsy misy dikany ianao satria mahatsiaro mijanona sy mijanona, ka mandroso.
Ny fampiharana ny saina sy ny vatana dia fitaovana entina mankafy ny fiara azon'ny fanahinao ampiasaina mandritra ny valopolo ka hatramin'ny sivifolo taona na mihoatra.
Ny fahatsapana ny fananana sy ny heriny dia singa manan-danja amin'ny fahatsapana hoe TENA. Feno lanja.
Eny ianao dia izany.
Izao tontolo izao misy tongotra. Be dia be ny mety mihodinkodina ao anatinao ao, mampiala ny eritreritra izany. Ara-bakiteny ny zava-drehetra tokony hataon'ny olombelona dia azonao atao: tsy mora, angamba, ary ekena fa tsy mahomby foana, fa mankanesa any.
tsy liana amiko intsony ny vady
rahoviana no fotoana tsara hitenenana hoe tiako ianao
ny fomba hiainana toy ny empath
Hetsika lehibe amin'ny sabotsy alina
toetra manome namana tsara
ny fomba hiatrehana ny namana manambony tena